Halkaan 'Kufsigu waa iska Caadi' - Human Rights Watch oo Warbixin Cusub soo saartay | KEYDMEDIA ONLINE
Halkaan ‘Kufsigu waa iska Caadi’ - Human Rights Watch oo Warbixin Cusub soo saartay
Muqdisho (KON) - Hay'adda Human Rights Watch ayaa Dowladda Federaalka ku eedeysay inaysan waxbka ka qaban tacaddiyada kufsiga ee sii badanaya, sidee ku sheegtay Warbixin Cusub oo ay Hay'addu soo saartay Khamiistii.
Xukuumadda cusub ee Soomaaliya waa in ay si degdeg ah u hirgalisaa isbadelo wax ku ool ah oo looga hortagayo tacaddiyada kufsiga ee sii badanaya, sidaasi waxaa Warbixin ay Shalay soo saartay ku sheegtay Human Rights Watch.
Hay'adda oo Warbixintaan cinwaan uga dhigay 'Halkan, Kufsigu waa Caadi', ayaa sheegtay in Kufsiga uu kusoo badanayo Dalka, Dowladda Federaalkana aysan waxbka ka qabanin.
HRW ayaa ugu baaqday xukuumadda Raisul Wasaare Cabdiweli iyo deeq-bixiyayaasha caalimaha ah "in la dajiyo istaraatajiyad dhamaystiran oo lagu yaraynayo kufsiga, dadka la soo kufsaday ee joogana lagu siinayo taageero degdeg ah, iyo in la dajiyo qorshe fog oo lagu afjarayo tacaddigan".
“Haween iyo gabdho badan oo ku nool magaalada Muqdisho ayaa waxa ay ku nool yihiin cabsi joogta ah oo ay ka qabaan kufsi,” ayey tiri Liesl Gerntholtz, oo ah agaasimaha waaxda xuquuqda haweenka ee Human Rights Watch. Waxa ayna intaa ku dartay “Ballanqaadyadii DowladdaSoomaaliya ay ka sheegtay fagaarayaasha ma aanay noqon kuwo horseeda ilaalin wanaagsan oo ay helaan haweenka iyo taageero loo fidiyo dadka ay dhibaatadu soo gaartay.”
Hay'adda ayaa sheegtay Kufsiga loo geesanayo Haweenka iyo Gabdhaha Soomaaliyeey ay geesanayaan Dad ay ku jiraan ciidammada dowladda, ee ku sugan caasimadda Soomaaliya, ee Muqdisho, waa sida lagu sheegay Warbixinta.
Warbixinta markii la diyaarinayay Human Rights Watch waxay wareysatay 27 haween ah oo ku sugan magaalada Muqdisho oo la kufsaday, iyadoo qaar ka mid ah haweenkaas waqtiyo badan ay jir dileen dambiilayaal kala duwan. Dhammaan kiisaskaas waxa ay dhaceen tan iyo bishii Agoosto 2012-kii markaa oo dowladda cusub ee Federaalka Soomaaliya ay xafiiska la wareegtay.
Warbixinta Halkaan baad ka Akhrisan kartaa: 'Kufsigu waa iska Caadi'